Intelo taom-baovao ? | NewsMada
Tsy vazivazy io fa tena marina ! Intelo manamarika ny taom-baovao ny Malagasy. Ny iray, ilay 1 janoary itambarana amin’ireo manaraka ny kalandrie gregoriana. Na io anarany io fotsiny aza efa ampy hanekena fa tsy an’ny Malagasy ny 1 janoary. Ny faharoa sy fahatelo, ireo « hono » no tena an’ny Malagasy. Tsy mariky ny filazana zavatra tsy azo antoka akory ny « hono » eto, fa hoenti-maneho ny fizaran-kevitra roa samy hafa na mifanipaka mihitsy aza.
Samy vanim-potoana nankalazain’ny Malagasy avokoa na ny taom-baovao ankalazaina isaky ny volana marsa (avrily tsindraindray) na ilay miovaova manaraka ny tetiandro lava. Ny an’izay ny marina ? Tsy mahagaga raha maivana sy ambanin-javatra ho an’ny Malagasy ny fanamarihana na fankalazana ireo vanim-potoana ireo. Tsy hitany izay arahina ! Mbola mahazo laka ny 1 janoary na efa voaporofo sy azo antoka aza fa tsy taom-baovao malagasy velively. Manampy trotraka ireo ny fiventesan’ny olona sasany fa fanompoan-tsampy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy.
Ny sasany aza sahy milaza fa mampaninona ny fiainantsika, na amin’ny volana inona na amin’ny andro inona ny hankalazana ny taom-baovao ? Anisan’ny fomba fisainana nandray anjara goavana tamin’ny fampidirana an’i Madagasikara ao anatin’ny lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana ny tahaka izany. Ireo rehetra maha Malagasy ny Malagasy, iharan’io avokoa, hany ka very ny fototra.
Noho ny kajikajy (politika, ekenomika, sns) asesiky ny « manam-pahaizana » ao an-tsain’ny Malagasy, zary tsy takany intsony fa ny fanariany ny maha izy azy (fihariana mifototra amin’ny tany, fiarahamonina miorina amin’ny fihavanana, sns) no niteraka izao fahantrana izao. Nanjary reharehan’ny mpitondra isan’ambaratongany ny fahaiza-mitrosa etsy sy eroa. Iray amin’ireo fady notandreman’ny Malagasy fatratra anefa ny mitrosa.
… Iny eo ihany fa raha izao no mitohy, hiampy iray indray io datin’ny taom-baovao malagasy io atsy ho atsy. Hikaroka daty vaovao eo ry zareo « manam-pahaizana » ka lazainy fa io ny antsika !